CUDURRADA STRAWBERRY: SIDA LOO AQOONSADO OO LOO DAAWEEYO - FUSARIUM AYAA LA RABAA
Waa muhiim! Strawberry wuxuu leeyahay iska caabin adag oo baraf ah, laakiin wuxuu ka baqayaa abaar. Koboca iyo midho-dhaliddu waxay kufaraxdaa xaaladaha mugdi yar.
Sida loo daaweeyo strawberries ka soo kallana
Waxaa jira cuduro badan oo beerta strawberry ah, daaweyntoodana waa in la bilaabo sida ugu dhaqsiyaha badan si looga hortago caabuq fara badan iyo badbaadinta beergooyska. Inta badan saameyn ku sariirood strawberry kallana. Cudurkaan wuxuu leeyahay dhowr nooc.
Daaweynta kore ee gogolka
Marka hore, calaamadaha caleemaha xoog leh ayaa u muuqda bakeeriga, si deg deg ah u kordha xajmiga loona rusheeyaa ubaxyada qulqulaya, ka dibna uurjiifka iyo peduncle-da ayaa soo baxa, kadibna caleemaha cagaarka ama cawlaha caleemaha cagaaran. Daaweynta, buufinta ka hortag ah ee dareeraha Bordeaux ayaa loo isticmaalaa guga, qaybaha bukaanka ayaa la saaraa ka dibna lagu gubay si looga hortago fidinta fungus beerta. Sidoo kale waa inaadan hilmaamin wareegga dalagga, ha u oggolaanin dhirta in ay ku badato, si joogta ah udajirta dhulalka, iyo hoyga fruiting, mulch ciidda caws iyo compost, sidaa darteed miraha bislaado ma taabto dhulka. Mar labaad, duurka waxay yeelan doonaan in la shaqeeyo dayrta si loo xoojiyo saameynta.
Ma taqaanaa? Strawberry waa hab fiican oo lagu xoojiyo nidaamka difaaca. Si looga fogaado lumista maaddooyinka waxtarka leh, waa in si dhakhso ah loo daaweyn karaa caaryaal la goglay.
Sida loo takhaluso kallana caddaan ah on strawberries
Wakiilka ugu weyn ee cudurkan waa fungus loo yaqaanno ascomycete, oo si xun u saameeya caleemaha iyo berry. Dhexdhexaadiyeyaashu waxay qaadaan dabaysha. Waxaad ka heli kartaa kallana caddaan ah inta lagu jiro Bisaylkiisa ee berry, iyo sidoo kale in joogitaanka qoyaan badan iyo abuur cufan. On kallana miro iyo fluff waa cad, caleemaha lumiyo midabka iyo qalalan. Waxaa suurtagal ah in lagu daaweeyo warshad leh caawimo ah inaad ku buufisid habab gaar ah ("Derozalom" ama ay u egtahay). Waxaa sidoo kale jira ilaalin aad u fudud ee strawberries cudurada: si looga hortago kallana caddaan, dhammaan dhirta bukaanka waa in la saaro waqti, waqti dhirta oo kaliya waa in la beeray, sariiraha waa in si fiican loo afuufo.
Daaweynta lafdhabarashada madow
Caleemaha madow waxay saameeyaan berry, taas oo, cudurku, udabdhaca caanaha madow, noqdaan biyuhu, lumiyaan dhadhanka, dhadhanka, kadibna noqdaan kuwo marka hore la jeexjeexo iyo xitaa dhammaan ubaxyada madow, taas oo ah mycelium ee fungus la leh sportangia. Heerkulka sare iyo qoyaanka ayaa sii xumeyn kara cudurka. Si looga fogaado xanuunka, strawberries waa in laga dhigaa qorraxda iyo roobka, iyo dayrta waxaa la qorsheeyay in ay ku buufiso Ordan, guga, marka koritaanka firfircoon ee caleemaha, oo leh Euparen iyo Switch.
Sidee loola tacaalayaa strawberries dufan
Marka ugu horeysa ee caleenta cagaaran, waa inaad isla markiiba qaadataa tallaabo, eegta farsamooyinka beeraha lagama maarmaanka ah.
Dareemida cirridka ee cawska
Gaduudashada petioles ee muddooyinka ku dhow dhammaadka xilli sii kordhaya, diyaaradda iyo cilad-darrada baadiyaha ayaa ah calaamadaha cudurkan. Marka hore, caleemaha hoose waxay u dhintaan, kadibna baadiyaha oo dhan. Ciidda bacaadka ah waxay tan ku dhacdaa xawaaraha iftiiminta, loamy iyo ciidda ciidda qunyar socod ah geedi socodkan. Marka la eego qaabka joogtada ah ee cilladda verticillary, caleemaha ayaa dib u dhac ku yimaada horumarinta, tiradooduna si weyn ayay hoos u dhacdaa.
Waxaa jira nidaam khaas ah oo looxa shaqeynayo strawberries cudurada:
Si loo ilaaliyo nooca berry ah laguma talinayo in lagu beero noocyada la yiraahdo nooca cudurkan, meelaha aagga dhawaan laga beeray yaanyada, baradhada, qaraha, madow, ukunta. Dhirta Kuwani waxay u nugul yihiin cudurka.
Wixii qudaar strawberries sii kordhaya, xayiray, bacrin ah, carrada si fiican u da'ay ayaa ku habboon, laakiin meelaha hoose iyo meelaha qoyan ee qoyan waa in laga fogaadaa.
Kaliya geedo la tijaabiyey oo leh iska caabin ah bakteeriya Verticillium waxaa lagu beeray ciidda wasakheysan, taas oo ah mid ka mid ah hababka ugu fiican ee loo xakameyn karo looska. Haddii noocyo ay u nugul yihiin dildilaaca, ka hor-fumigga ee ciidda waa in la sameeyaa, kaas oo gacan ka gaysan doona in laga tirtiro cayayaanka carrada, haramaha iyo xitaa abuurkooda, bakteeriyada kuwa xakameynaya cudurrada, fungi, iwm. Waxtarka ugu sarreeya waxaa lagu bixiyaa 33% xalal chloropicrin. iyo 66% loogu talagalay bromide methyl.
Waxaa lagu soo bandhigay gaduudka silsilad xidid, wuxuu ku fidaa geedaha bukaanka ah iyo carrada horay u wasakhaysan. Marka hore, caleemaha hoose waxay u engegaan, ka dibna silsilada caarada ee xididka dhirta waxay helayaan midab guduudan, iyo madow iyo dhimista hababka yaryar oo isku mar ah.. Tallaabooyin ka hortag ah, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo xididada strawberry ee xal "Fundazole" ka hor inta aan la beeri. Waxaa looga baahan yahay in lagu sameeyo daaweynta strawberries qaba cudur. Wixii daaweynta daawooyinka ku habboon "Ridomil" iyo "Kvadris". Waxaa haboon in la xusuusto in aysan macquul ahayn in la beero strawberries on ciidda taas oo baradho hore ayaa koray. Kadib habka beeritaanka, ku buufin leh fungicides - Fitosporin iyo Extrasol ayaa sameyn doona. Sidoo kale, geedo aan la beeray karaa meel fog oo midba midka kale, ugu yaraan 40 cm.
Waa muhiim! In kasta oo xaqiiqda ah in strawberries loo arko in ay yihiin berry macaan, sonkorta content ee waa ka yar liin.
Fungus wuxuu kufilanayaa gabi ahaanba strawberry, dhimashadu waxay dhacdaa 45 maalmood gudahood. Fusarium isdabamarinayaan dhirta xilliga xagaaga adoo galaya geedo ay saameeyeen beerta. Dhalashada dhirta ayaa joojisa si ay u koraan, caleemuhu waxay u engegaan oo u dhintaan. Cagaarshow waa in lagu buufiyaa "Fundazol" iyo "Trikhoderma", ciidda waa in lagu daaweeyaa "Nitrafen". Ka hor inta beerto, gogol dhigo xididdada dhirta ee "Gumate-K", iyo bacrimiya dhulka leh oxide potassium.
Waa maxay sababta dhirtu u muuqato caleemo strawberry
Dhibcaha on caleemo strawberry ku hadlaan waxyeello geedka by fangaska kala duwan.
Cudurka qafiifka ah. Waxay caqabad ku leedahay caleemaha, ubaxa iyo cawska ee strawberries. Cudurka fungal ayaa ku faafaya biyo, caleemaha yar yar ee caleemaha leh caleemaha cad, oo dambe ka dhumo oo godka u muuqda meel. Daaweynta waxaa lagu sameeyaa habka "Beddelidda" iyo "Euparin", laakiin si looga fogaado muuqaalka cudurka, waxaa looga baahan yahay in lagu buufiyo caleemaha daawooyinka ay ku jiraan bakteeriyada si ay u bilaabaan ugxan. Si joogto ah u soo saar dhirta buka. Ka hor inta ubax, waa suurad wacan in la hirgeliyo 3-4% dareeraha Bordeaux; for kuwa raba, waxa rusheeyaa strawberries dayrta - in dib loo soo celiyo nidaamkan kadib dhammaadka fruiting.
Dhibaatadani waxay keeni doontaa dhibaato badan, haddii aadan bilaabin waqtiga si aad u xaliso dhibaatada. Horumarka cudurka wuxuu dhacaa July - August, inta badan caleemaha ku xanuunsado, yar yar oo shuruud ah iyo petioles. Meelaha waaweyn waxay ku muuqdaan caleemaha, laaluushka iyo qaabka muuqaalka ah, marka hore guduudan madow, ka dibna qaadashada midab madow. Maqaarada Puffy ayaa ku kala firirsan dushooda - miro-meyga oo ah wakiilka keena cudurka, oo ugu dambeyntii qarxay, iyo nuucyada macaanka ee qalajinaya. Fruiting of fungus, kaas oo fududeyn kara cudurka, dhicin, iyo caleenta siinayaa aragti ah ee qalajiyey. Dhibcooyinka kudheerka iyo cawska ayaa ah kuwo yaryar, xoogaa niyadjab leh oo aan midho dhalin.
Meelo yaryar oo ku yaalla petioles iyo boorash, xoogaa niyadjab leh, iyada oo aan la dareemi karin fruiting, laakiin sidoo kale noqda casaan. Heer kulul oo heer sare ah ayaa gacan ka geysta horumarinta fungus. Isboorti ayaa si xoog leh loogu abuuray iftiinka iyo maqnaanshaha labadaba. Infekshanka waxaa lagu qaadaa qoyaan qoyan, kaas oo jilicsanaya buulasha xayawaanka ah ee isku wada qalajiyey, iyo natiijada, waxay u duulaan hawada. Badanaa infekshanku wuxuu ka yimaadaa qaybta hoose ee dhirta, xilliga xaddidaadda waa 5 ilaa 10 maalmood. Sifooyinka waxaa lagu daaweeyaa "Fundazol", sida taxadar, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo strawberries guga ka hor beerashada Bordeaux isku dar ah.
Ma taqaanaa? Strawberry waa bakeeriyada kaliya ee adduunka, miraha taas oo ku taal dibedda, ma gudaha.
Sidee loo daaweyn karaa strawberries ka soo xiirta budada ah
Cudurku wuxuu u muuqdaa qaab muuqaal ah oo midabkiisu yahay midab cad oo labada dhinac ee caleemaha. In caafimaad daro ka baxdo koritaanka joogtada ah ayaa si joogta ah u joojisa, waxay noqdaan kuwo cufan oo curl u ah cidhifyada dhexda, isla sidaas waxay ku dhacdaa shaarbob strawberry, iyo sidoo kale curliness caleemaha waa dabeecad. Naaso diirran ayaa sii xumeynaysa cudurka. Sida tallaabooyinka xakamaynta ee guga, marka caleemaha koraan, waxay ku buufin leh fungicides, iyo haddii calaamadaha cudurka muuqan, waxaa lagu daaweeyaa Fundazole ka dib goosashada.
Maareynta caleemaha leh 3% urea dhamaadka xagaaga oo lagu xoojiyo xal boron inta lagu jiro muddada ubax 3-4 cisho kasta waxay noqon doontaa cunto quudin fiican. Tani waxay gacan ka geysan doontaa xoojinta miraha mustaqbalka, iyo sidoo kale kordhinta cabbirka ugxan iyo berry.
Ka taxaddar strawberries, ha iska dhaga tirin cudurada soo baxaya, waxayna kuugu mahadcelineysaa si deeqsinimo leh si goosta cajiib ah.